Qulqulka: waa maxay, astaamaha iyo tababarka | Saadaasha Shabakadda
Mid ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada ee saamayn ku yeelan kara diyaaradda waa baraf. Waa dhigaalka barafka ee diyaaradda waxaana la soo saaraa marka biyaha dareeraha ah ee dhalaaliya ay barafoobaan markay wax ku yeeshaan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan sifooyinka, asalka iyo muhiimadda miraha.
1 Waa maxay barafku
2 Ka ilaalinta dhirta
4 Qaababka aasaasiga ah
Waa maxay barafku
Waxaan ka hadleynaa saameyn saadaasha hawada oo ka dhacda qeybta sare ee jawiga oo saameyn ku yeelan karta diyaarada markay maraan meelahaas. Dhacdadan, barafku wuxuu inta badan u hoggaansamaa cunsurrada dabayshu la socoto. Dhammaan canaasiirta ka soo baxda diyaaradda waa la beddeli karaa iyada oo ay sabab u tahay ubax.
Aan aragno maxay yihiin isbeddelada ugu waaweyn ee sababi kara barafka qaybaha ka soo baxa qolka diyaaradda:
Muuqaalka oo yaraaday Haddii barafku u hoggaansamo qaybo gaar ah, diyaaraddu waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada aragga meelaha fog iyo kuwa dhexdhexaadka ah.
Wax ka beddelka astaamaha hawada: Marka habka gaadiidka uu yahay hawo, aerodynamic guryaha waxay muhiim u yihiin isticmaalka hufan ee shidaalka. Barafku wuxuu ku abuuri karaa xasillooni darro aerodynamics-ka diyaaradda.
Miisaanka oo kordha: diyaaradda waxaa laga yaabaa inay la kulanto koror culeys ah iyadoo kuxiran barafka gadaal awgiis.
Awood lumis: waa cawaaqib toos ah miisaanka oo kordha. Markuu miisaanka kordho, diyaaradda ayaa awoodda si tartiib tartiib ah u lumisa.
Gariirka: Dib udhacyadan joogtada ah waxay sababi karaan daal qaab dhismeedka dhamaan qeybaha diyaaradda.
Waan ognahay in barafka diyaaradda ay ku dhici karto daruuro, ceeryaamo ama ceeryaamo. Dhammaan waxay kuxirantahay xaaladaha deegaanka ee waqtigaas la helo. Waxay sidoo kale ku dhici kartaa laabta roobab. Xaaladdan oo kale, waxaa loogu yeeraa roob qabow.
Ka ilaalinta dhirta
Waxa ugu horreeya ee lagu ogaanayo inaad naftaada ka ilaaliso barafku waa inaad ogaato meelaha ay u badan tahay inay ku soo noqnoqdaan Laguguma talinaayo inaad u duusho meelaha xaaladaha saadaasha hawadu waxay ku habboon yihiin sameynta ubax. Hal dariiqo oo looga hortagi karo dhacdadan ayaa ah in la helo qalab diir-ka-baxa ah oo ka caawiya ka saarista wixii ku soo kordha Si kastaba ha noqotee, cabirkan ilaalinta ayaa ka qaalisan maaddaama ay tahay in lagu daro diyaaradda.
Waxaa jira aaladaha qaboojiyaha si looga fogaado sameysmo isku mid ah oo ha u oggolaan inuu ku ekaado dusha sare. Nidaamyadani waxay noqon karaan dhowr nooc:
Makaanikada dahaarka leh: Iyagu waa kuwa leh dahaadh matic ah oo marka hawadu ku dhacdo hawo, jabiyo barafka. Badanaa waxaa loo isticmaalaa algae iyo dabada dabada.
Kuleylka: Iyagu waa kuwa kululeeyayaasha korontada ku shaqeeya ee loo isticmaali karo tuubada Pitot. Waxay sidoo kale yihiin kuleyliyeyaasha hawada ee loo isticmaali karo cidhifka hore ee biyaha, jilayaasha, carburetor iyo dabada dabada.
Kiimikooyinka: Kuwani waa qubeysyo kala duwan oo lagu sameeyay walxo caawiya in biyaha la qaboojiyey ku jiraan xaalad dareere ah. Waxa ugu caansan waa in muraayadda muraayadda gawaarida loo isticmaalo si joogto ah qalabka wax lagu rido.
Aynu falanqeyno waxa kiciyayaashu yihiin. Ugu horreyntii, waxaa loo baahan yahay cabitaan biyo ah, heerkul heerkeedu aad u hooseeyo (waxa ugu badan ee caadiga ahi waa inuu ka hooseeyaa eber) iyo heerkulka dusha sare ee diyaaradda sidoo kale wuxuu ka hooseeyaa eber. Dhibco waaweyn ayaa jiri kara sidaa darteed gudaha daruuraha heerkulkiisu yahay -2 iyo -15 digrii iyo dhibco yaryar oo laga helo heer kulka -15 iyo -40 digrii.
Qaar ka mid ah xaaladaha wanaagsan ee deegaanka ee jiilka ubaxku waa isku xirnaanta heerar hoose iyo degganaan la'aanta jawiga. Inta lagu jiro xasilooni darrada jawiga, kacsanaanta xoogga leh ee biyaha kulul waa kuwo aad u soo noqnoqda, kuwaas oo, markay isku dhacaan tiro badan oo biyo qabow, waxay soo saaraan daruuro gaagaaban. Jeebka hawo qabow dhererkiisu wuxuu door bidaa dhaqdhaqaaq toosan iyo horumarka daruuraha iyo xasillooni darro weyn.
Marinka nidaamyada hore ee wata dabaylaha xawaaraha sare leh ayaa sidoo kale inta badan keena icing. Waxay kuxirantahay aaga ay diyaarada soo marto, saameyntan ayaa u badan ama ka yar in ay dhacdo. Tusaale ahaan, dhulka buuraleyda ah wuxuu had iyo jeer doorbidaa hawo kor u kac waxayna gacan ka geysataa kordhinta tirada dhibcaha biyaha ee sameeya daruuro. Tani waxay kordhisaa itimaalka barafka. Saameynta xeebaha waxay la mid tahay saamaynta hadalka. Hawada qoyan ee ka timaadda badda waxay gaaraan heer uumi-qaadasho marka ay kor u kacdo. Marka dhererku kordho, waxa ku jira biyo sare oo dareere ah ayaa daruuraha ka soo ifbaxaya suurtagalnimada in ukunku sii kordho
Qaababka aasaasiga ah
Aynu falanqeyno maxay yihiin qaababka aasaasiga ah ee ubaxyada jira:
Baraf weyn Waa baraf cad, hufan, jilicsan oo si fudud u soo baxa. Badanaa waxaa lagu sameeyaa heerkul u dhexeeya -15 iyo -40 digrii inta badan dhibco yaryar. Nidaamka sameynta noocan oo kale ah barafka granulated si dhakhso leh ayaa loo sameeyaa.
Baraf cad: waa nooc ka mid ah baraf cad oo hufan, hufan, siman iyo inuu la soo baxo dhib badan. Waxaa badanaa laga sameeyaa heerkulka u dhexeeya -2 iyo -15 digrii waxaana badanaa laga sameeyaa dhibco waaweyn. Hawsha barafka noocan ah waa mid gaabis ah. Xaqiiqduna waxay tahay in dhibcaha ay socon karaan wax yar ka hor inta aan la qaboojin. Sidan oo kale, dusha barafka ayaa sii kordhaya. Qulqulka qulqulka xilligan ee hareeraha garabka diyaaradda ayaa la carqaladeyn karaa si ka ballaaran noocii hore ee barafka.
Roob qabow: waa mid ka mid ah kuwa ugu halista badan ee jira. Waa ciir aad u khatar badan oo diyaaradda ah. Taasina waa in barafku yahay mid hufan oo roobabku si isku mid ah ugu socdaan diyaaradda. Muuqaalka kuleylka ee dhererka oo leh rogrogasho heerarka celceliska ah ayaa aad ugu habboon sameynta roob qabow.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan miraha iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Xaji
Iodide qalin ah